Home Wararka Ciyaaraha Maanta Macalinkii hore ee kooxda barcelona Pep guardiola oo ka hadlay waqtiga xun...
Waa wax caadi in la yiraahdo Pep Guardiola waa midka gaarka ah ee maanta ugu fiicab Sida gaarka ah ee ay tahay in dhowr toddobaad hadda ay joogsatay inay noqoto war markii uu guuleysto, in uu sidaas ku sameeyo qaab qancin ah, indho-qabasho iyo xitaa hal-abuurnimo, iyada oo qaar ka mid ah runtii la yaab ku noqotay ciyaarta booska ee kooxdiisa.
Si kadis ah, Jose Mourinho wuxuu ahaa tababarihii ugu dambeeyay ee garaaca macalinka kooxda Manchester City. Waxay ahayd Nofembar. Waxay ahayd 2020. Waxaana Tottenham ay ku badisay 2-0. Laakiin tan iyo markaas, 28 kulan ayaa dhex maray kulamada maxalliga ah iyo kuwa Yurub mana jiro qof awood u leh inuu jidkooda istaago.
Waxaa uu guuleystey 25 jeer mudadaas, oo 21 ka mid ah ay isku xigxigeen, halka ay jireen kaliya seddex barbaro, iyadoo ku dhawaad 70 gool ay dhaliyeen waxana kaliya laga dhaliyey sagaal inta koox ay ka horyimaadeen. City ayaa carareysa Premier League, waxaana ay weli tahay mid ka mid ah kuwa ugu cadcad inay qaadaan Champions League. Wolves ayaa noqotay dhibanaha ugu dambeeyay kooxdii laga qaatay habeenimadii Talaadada markii lagu garaacay 4-1 garoonka Etihad.
Aniguna waxaan la yaabanahay, maalmahan doorashada ee Barcelona markii musharraxiintu ay la mid yihiin kuwa ku wareegaya agagaarka Lionel Messi, muxuu midkoodna ugu tagin Manchester inuu isku dayo inuu ka dhaadhiciyo mid ka mid ah dadka tirada yar ee awood u leh inuu ku soo celiyo weynaanta kooxda heer kasta.
Waan ogahay in Guardiola uu albaabkaas xidhay dhawr jeer. In uu ku faraxsan yahay koox uu ku dhaqmo wax walba oo uu la cusbooneysiiyay qandaraaskiisa dayrta. Waxa kale oo ay u muuqataa in laga yaabo in hamigiisa xiga uu yahay inuu tababare u noqdo koox qaran. Ma aqaan. Laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay inaan isku dayno. Cidina ma aysan qaban. Kaliya qaabab cabsi leh iyo adeegga dibnaha ee Pep si dhakhso leh u yareeyey.
Aad ayey u wanaagsan tahay in Messi laga dhigo mid faraxsan Way ka wanaagsan tahay isaga la’aantiis. Laakiin haddii ay ku saabsan tahay dib-u-dhiska, waxaan ku bixin lahaa 555 milyan euro Guardiola. Barcelona, qasnadda iyo LaLiga way ku mahadsan yihiin.
Previous articleChelsea iyo bayern Munchen kuma biiri doono Erling Haalan oo hadlay.
Next articleQaar kamid ah garoomada kooxaha ingiriiska oo lagu ciyaari doono Tartanka Euro 2020 oo shaaca laga qaaday.